Barcelona Oo Barbaro Niyadjab Leh Ku Gashay Camp Nou & Tababare Ernesto Valverde Oo Ku Sii Dhawaanaya In La Ceyriyo | Somali football world
Home SOOMAALI Barcelona Oo Barbaro Niyadjab Leh Ku Gashay Camp Nou & Tababare Ernesto...
Barcelona ayaa barbaro niyadjab leh ku gashay garoonkeeda kulankii ay soo dhaweeyeen kooxda Czech Republic ee Slavia Prague iyagoo ku kala baxay barbaro goolal la’aan ah.
Natiijadaana ayaa ka dhigan in Barcelona ay sideed dhibcood ku hogaamineyso Group F iyadoo weli aan group-ka lagu kala bixin madaama Inter iyo Dortmund ay min afar dhibcood leeyihiin oo ay haatan isla ciyaarayaan.
Waa kulankii labaad ee isku xiga ee Barcelona aysan badinin iyadoo isbuucaan ay guuldarro kala kulantay horyaalka La Liga, iyadoo tababare Ernesto Valverde uu ku dhawaanayo in laga ceyriyo shaqada.
Barcelona ayaa fursada intooda badan heshay qeybtii hore ee ciyaarta iyadoo Lionel Messi uu birta garaacay daqiiqadii 36aad ka hor inta uusan goolhaye Kolar labo fursadood oo isku xigixgta ka beeninin xiddiga reer Argentina dhamaadkii qeybta hore ee ciyaarta.
Kooxda Czech Republic ka dhisan ayaa ciyaarta ku soo gashay inay xadido weerarka Barcelona, waxaana ay ku guuleysteen inay iska caabin sameeyaan inkastoo aysan abuurin fursado badan qeybtii hore oo lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah.
Daqiiqadii 55aad goolhaye Kolar waxa uu kubad ka qabtay Sergi Roberto oo baas ka helay Dembele halka daqiiqadii 59aad Barcelona ayaa shabaqa soo taabatay laakiin goolka waa la diiday uu Messi offside ahaa ka hor inta uusan Vidal kubada shabaqa ku taabanin.
Daqiiqadii 76aad Ansu Fati oo bedel ku soo galay ayaa kubad qurxoon u dhigay Lionel Messi mar kale waxaa goolka u diiday goolhaye Kolar.
Barcelona ayaa awoodi weysay inay dhaafto kooxda Slavia Prague iyadoo ciyaarta ay ku soo dhamaatay barbaro 0-0 ah.
Group-ka dhimashada ee Group F ayaa ah mid haatan sii adkaaday iyadoo Barcelona ay 4 dhibcood ka sareyso kooxaha Dortmund iyo Inter Milan oo kulankooda afaraad isla ciyaarayo waqti dhow.
Previous articleLuka Modrić oo go’aan ka gaaray mustaqbalkiisa Real Madrid, Lionel Messi oo ka warbixiyey faa’iidooyinka uu Frenkie de Jong u leeyahay Barca & Wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha Caawa
Next articleInay Liverpool Hal Gacan Ku Dhigi Doonto Koobka Premier League, Talada Uu U Soo Jeediyay Man City & Falanqeynta Kulanka Liverpool & Man City Ee Paul Merson